मुलधारका अमेरिकी सञ्चारको अनुमानलाई मिथ्या साबित गर्दै प्राप्त अमेरिकी राष्ट्रपति निर्वाचनको नतिजाले मर्माहत संसार भरिका जनतालाई तङग्रीन अझैं केहि समय लाग्ने छ । मिडियामा आउने समाचारलाई विश्वास गर्दै आफ्ना धारणा बनाउनेहरु सर्वसाधारण मात्र हुने रैनछन् भन्ने प्रमाण विस्तारै तिनै मिडिया मार्फत आउँदैछन् । अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव डोनाल्ड ट्रमले जित्दैनन भनि बाजी लगाउने अमेरिकी प्राध्यापक सामवाङ जस्ता मानिस तिनै मिडियाको भरपर्दा किरा खान बाध्य भएका छन् ।
ताइवानी मूलका प्राध्यापक सामवाङ अमेरिकी प्रसिद्ध प्रिन्सटन विश्वविद्यालयका तथ्याङ्कशास्त्री तथा न्यूरो साइन्टिस्ट हुन । भर्खरै सम्पन्न अमेरिकी चुनावमा डोनाल्ड ट्रम्पले चुनाव जित्न त परेको कुरा २४० भन्दा बढि इलेक्ट्रोरल मत ल्याए किरा नै खाने घोषणा सामाजिक सञ्जाल मार्फत अक्टोबर १९ मा गरिदिए । वचनका पक्का वाङलाई सिएनएनका पत्रकारले उनको भविष्यवाणी र कसमलाई स्मरण गराउने वित्तिकै किरा खान तयार भए ।
टेलिभिजनको पर्दामा प्रत्यक्ष देखिने गरि महमा चोपेर किरा खाँदै गर्दा पत्रकार स्मेरकोनिसको सवाल सहर्ष स्वीकार गरे । किराको स्वाद कस्तो लाग्यो ? वाङले अनुहारमा सामान्य परिवर्तन ल्याउँदै जवाफ दिए, नट्टी । पत्रकार सामु अझै खुल्दै किरालाई काजु र बदामसँग तुलना गर्न पुगे प्राध्यापक वाङ । उनले भने, किरा प्रोटिन र अन्य पौष्टिक तत्वको स्रोत हो । प्राध्यापक सामवाङले वचनप्रति निभाएको निष्ठालाई सम्मान गर्दै पत्रकार स्मेरकोनिसले आफ्नो कार्यक्रमको बीट मारे ।
लोकतन्त्रको आडमा उदाएका रहस्यमयी पात्र माननीय स्वास्थ्य मन्त्री गगन थापा असहमतिको राजनीति गर्दै नेपाली राजनीतिमा स्थापित हुँदै थिए । नेविसंघको राजनीति गर्दै लोकतन्त्र र गणतन्त्रको आवाज उठाउने गगनको अतित कलेजको स्ववियु सभापति हुँदा निर्माणको नाममा गरिएको फजुल खर्चको हिसाब किताबले धुमिल थियो भन्ने कुरा कमै मानिसको जानकारीमा थियो ।
संविधानमा लेखिएको अमुर्त कुरा समाजवाद उन्मुख शब्दलाई आफ्नो जिब्रोमा निफन्दै सोझा नेपाली जनताको भावनासँग खेलवाड गर्ने थापाको कलामा स्वास्थ्य र शिक्षा कसरी गरिब जनताको पहुँचमा पुर्याउन सकिन्छ ? भन्ने कुनै कार्यक्रम १०० दिनसम्म बाहिर ल्याउन नसक्नुले उनको हैसियत विस्तारै खुल्दैछ । फगत सुधारलाई नारा बनाउँदै गरिने पुँजीवादको सेवाले गगन पनि ध्वनी प्रदुषणको कारक बन्दैछन, भन्छन युवायुवतीहरु ।
अझै पनि केही जमातहरु उनलाई शंकाको लाभ दिदैछन र भन्छन् १०० दिनमा के नै गर्न सकिन्छ र ? हिजोका उनका भाषणले हिन्दी फिल्म नायकमा अनिल कपुरले देखाएको क्रियाशीलता र नतिजाको अपेक्षा राख्ने जमात अझै पनि उनको सम्पत्ति विवरण पढ्न नपाउँदा मर्माहत छन् । संसदिय राजनीति माथि विश्वास गर्ने मन्त्री थापा आफ्नो कार्य क्षमता र नतिजाले तडपिदैछन् । उनीबाट ठूलो अपेक्षा राख्ने जमात उनकै कछुवा गतिको कार्यक्रम पनि पुष्पकमल सरकारले लागु नगर्दा बडो धर्म संकटमा छन् ।
हाँ मे हाँ मिलानेका...।।
हाल सुजाता स्तर क्यान्सरबाट पीडित छिन् । हामी कामना गर्छौ, उनी चाँडै नै क्यान्सरलाई पराजित गर्न सफल हुने छिन । सुजाताको क्यान्सरको उपचार नेपाली लोकतन्त्रको निम्ती क्यान्सर हुने स्थिति आउनुको प्रमुख कारण उनको मजबुत आर्थिक हैसियतमा आएको लालचीपनले गर्दा नै हो । सारा गरिब जनताले आफू बाँच्न भौतिक सम्पत्ति बेचेर उपचार गर्न हुने सुजाताले रोग लाग्दा पनि कमाउनु पर्ने उनको लालचीपनले गर्दा उनीमाथि सहानुभूति दर्शाउने बेलामा पनि औंला ठड्याउनु पर्ने स्थिति आइ लागेको छ, जनता सामु ।
1815 पटक पढीएको